छाप्रोमा नपसेको दशैं
तँपाईको दशैं कति भड्किलो,
हेर न ! छिमेकीको मन दुखाई रहेछौं ।
चाँड नि यसरी मनाउँछन र ?
फेरि अस्ति मात्रै,
घरखेत बगाइ लग्यो, आफन्त गुमे उनका !
त्यो टहरोमा चुल्हो सल्काउन ।
यो दशैमा तिम्रो मात्रै चुरिफुरि छ,
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आश्विन १४, २०७१ १५:५१:४७